जीसस भालेरो। छायाको प्रतिध्वनीको लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी। जेसस भलेरो, ट्विटर प्रोफाइल।
जीसस भालेरो सान सेबास्टिनका हुन्, जैविक विज्ञानका डक्टर र हालको इन्चार्जमा छन् टेक्नालिआ, दक्षिणी यूरोपमा सबैभन्दा ठूलो निजी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र। Y आफ्नो खाली समय मा उनी लेख्छन्। संग प्राचीन इतिहास र मध्य युगमा विशेष चासो, यो प्रीमियर भयो संग साहित्य मा अदृश्य प्रकाश र अब तपाईसँग दोस्रो भाग छ, छायाको प्रतिध्वनी। तपाइँको समय र यसप्रति समर्पित दयाको लागि धेरै धेरै धन्यबाद साक्षात्कार.
जेसस भालेरो - अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: छायाको प्रतिध्वनी तपाईंको नवीनतम उपन्यास र को निरन्तरता हो अदृश्य प्रकाश। तपाईं हामीलाई यसमा के भन्नुहुन्छ?
JES VS VALERO: यो एक हो कथा गणना तीन पटक मा। मार्टा, एक कला बहाली, एक पुरानो पुस्तक फेला पार्छ। यो जीनको डायरी हो, एक अनौठो पात्र जो १२ औं शताब्दीमा बस्थ्यो। मेरो उपन्यासमा हामी दुबैको कारनामहरू अनुसरण गर्नेछौं, जसले एक लुक्न खोज्छन् र पत्ता लगाउँदछन् प्राचीन अवशेष येशू ख्रीष्टको समयदेखि। चाँडै तिनीहरू दुबैले थाहा पाउनेछन् कि उनीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा हाल्दै छन् र पुरानो अवशेष एउटा वस्तु हो जुन चर्चले सधैं लोभ गर्यो। पाठकले पत्ता लगाउनेछ ऐतिहासिक थ्रिलर, पूर्ण सेट, र नायकहरू पुरानो मठ र स्क्रिप्टोरियमको साथ यात्रा गर्नेछन् जुन कुञ्जीहरू पत्ता लगाउन प्रयास गर्दै जुन प्राचीन चर्चहरू र हस्तलिपिहरूमा लुकेका छन्।
जेभी: मलाई लाग्छ यो केहि कथा हुनेछ पाँच वा को Hollister। त्यसोभए म चाँडै आफूलाई साहसिक पुस्तकहरूमा डुबाएँ भेर्न o सालगारी दस वर्षको उमेरमा खोजी गर्नु भन्दा पहिले मलाई लेख्न चाहेको पुस्तक: रिंगको प्रभु। मैले लेखेको पहिलो कथा भएको छ अदृश्य प्रकाश। यो कल्पना र लेख्न मलाई लगभग बीस बर्ष लाग्यो। यसैले, नयाँ लेखक भएता पनि, यो धेरै नै विस्तृत पुस्तक हो जुन एक धेरै जटिल कथानकको साथ अनुसरण गर्न सजिलो छ।
जेभी: मेरो युवावस्थामा कुनै श .्का बिना टोलकिएन। त्यसोभए वयस्कमा म सबै लेखकहरू र विधा पढ्ने प्रयास गर्दछु। यसले मलाई सिक्न र अझ राम्रा कथाहरू भन्न मद्दत गर्दछ। यदि मैले मेरो मनपर्ने लेखक को हो भनेर भन्न छ भने, म भन्न सक्छु मुराकामी र पावल कस्तूरी। स्पेनिस लेखकहरूमा मैले धेरैलाई देखाउन सकिएला, तर मैले पढेको कुराबाट प्रकाश पार्ने थिएँ पेरेज-रिभर्टे कसरी उहाँ सँधै कठिन कार्य दृश्यहरू व्यवहार गर्दछ बारेमा।
JV: यो छनौट गर्न गाह्रो छ। हुनसक्छ म भन्छु एरगोर्न, को रिंगको प्रभु। उहाँ एक साहसिक नायकको मिश्रण हुनुहुन्छ जो आफ्नो विश्वको दर्शनमा सत्य छ, जसको जीवनमा लक्ष्य छ र यसलाई प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेको छ, तर कुनै पनि हिसाबले यो गर्न इच्छुक छैन। एक छ सम्मान कोड धेरै आफ्नै। नायक मध्ये एक अदृश्य प्रकाश, कालो नाइट, फरक भए पनि, केहि ती गुणहरू छन् जुन मेरो लागि अत्यन्त चाखलाग्दो छ।
JV: I म हातले लेख्छुनोटबुकमा पहिले, अब एक मा उपकरण जसले मलाई यो गर्न जारी राख्न अनुमति दिन्छ तर मलाई फाइदा दिन्छ कि यसले मेरो हस्तलेखन प्रक्रिया गर्दछ र यसलाई सीधा डिजिटाइज गर्दछ। पछि, सुधारमा, म यो कागजमा पनि गर्छु र मात्र जब म पाण्डुलिपिलाई हानी गर्दछु मँ कम्प्युटरमा परिवर्तनहरू परिचय गर्दछु, जुन कुरा जुन जुन जुनसुकै मैले अनगिन्ती पटक दोहोर्याउँदछु।
जेभी: मलाई चाहिन्छ मेरो वरिपरि धेरै हल्ला। म कफी पसल, एयरपोर्ट र रेस्टुरेन्टहरूमा लेख्छु जब म यात्रा गर्छु। म केवल खोज्दै छु सुधार गर्न मौन। हालसालैका वर्षहरूमा म पनि प्रायः लेख्छु डु boat्गामा बिदाको समयमा लगभग एक तिहाइ छायाको प्रतिध्वनी यो एक महिना भर लेखिएको छ कि म ब्राउज गर्दै थिए।
JV: मलाई प्रायः सबै मन पर्छ। विधाले मलाई खासै फरक पार्दैन, म ऐतिहासिक उपन्यासहरू, अपराध उपन्यासहरू, कल्पना, विज्ञान कल्पना वा लिls्ग बिना उपन्यासहरू पढ्न सक्छु। म सबै चीजबाट सिक्छु र मलाई लाग्छ यसले मलाई अझ राम्रा कथाहरू भन्न मद्दत गर्दछ। वास्तवमा मलाई रुचि के लगातार लेखक परिवर्तन गर्दै छम हरेकबाट फरक-फरक चीजहरू बुझ्छु।
जेभी: अब म केहि क्लासिक्स पढ्दै छु। अहिले म पढ्दै छु हेड्रियनको सम्झना मार्गारेट Youcenar द्वारा र अघिल्लो एक भएको छ विदेशमा अल्बर्ट क्यामसद्वारा, जुन म फ्रान्समा यसको मूल संस्करणमा पढ्न चाहान्छु। यस बखत म के लेख्दै छु भन्ने बारेमा म मेरो नयाँ उपन्यास संग अग्रिम, जुन अझै सम्म शीर्षक छैन तर लूप बन्द हुनेछ अदृश्य प्रकाश र छायाको प्रतिध्वनिबाट। म यो वर्षको अन्त सम्म समाप्त गर्ने आशा गर्दछु, यद्यपि यो गर्मीमा म धेरै लेख्न सक्दछु कि त्यसमा निर्भर छ। मेरो दिमाग पहिले नै छ तीन अन्य कथाहरू म भन्न चाहान्छु, तर म ती मध्ये एकको बारेमा निर्णय लिने छैन जबसम्म मैले अघिल्लो समाप्त नगरी प्रकाशकलाई बुझाउँछु।
जेभी: हुनसक्छ म अवस्थाको राम्रो उदाहरण होईन। मेरा दुई उपन्यासहरू प्रकाशित गर्नु मेरो लागि दुःस्वप्नको कुरा रहेन। मैले यसभन्दा अघि प्रकाशित गरेको थिइनँ र म प्रकाशन विश्वमा कसैलाई चिनेको थिइनँ, तर मेरो पाण्डुलिपिले तुरून्तै मेरो एडिडाबुन्डो एजेन्ट पाब्लो अल्वेरेजको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। एक पटक यो केस भएपछि सबै चीज धेरै छिटो गयो र पेन्गुइन रान्डम हाउसका कार्मेन रोमेरोले यो पढ्ने बित्तिकै हो भने। मलाई थाहा छ कि अन्य लेखकहरूको लागि सबै कुरा धेरै जटिल भएको छ र हुनसक्छ यो भविष्यमा पनि मेरो लागि हुन सक्छ। लेखनबाट बाँच्नको लागि धेरै जटिल छ, केवल केही थोरैले यो गर्न सक्दछन्, र म त्यो घटनाको साथ व्याकुल छैन। मलाई मेरो जागिर र लेखन मनपर्छ जुन म मनपर्न सक्छ तर म कुनै दबाब बिना गर्दछु।
जेभी: म कुनै पनि परिस्थितिमा राम्रोसँग अनुकूल छु र मैले खास गरी नराम्रो COVID अनुभव गरेको छैन। मेरो फाइदा छ: म एक सूक्ष्मजीव विशेषज्ञ हुँ र म के हुन्छ भनेर बुझ्दछु र प्रायः भन्दा बढी प्राकृतिक रूपमा के हुन सक्छ। यो सबै अस्थायी हो र हामी चाँडै हाम्रो सामान्य जीवनमा फर्कने छौं। म के कुरा स्पष्ट गर्दछु कि परिस्थिति मेरो उपन्यासहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत हुने छैन, म त्यस दृष्टिकोणबाट त्यस विषयमा खासै रुचि राख्दिन। त्यहाँ लेख्नको लागि अझ राम्रा चीजहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » जीसस भालेरो। छायाको प्रतिध्वनि को लेखक संग साक्षात्कार
लुसिंडा रिले पुस्तकहरु